TropiCanna mbeu yembanje | MyWeedSeeds.com
TropiCanna mhodzi inokonzeresa kubva pamakore mana ekungwarira, kusarudza kuberekana pakati pemhando dzembanje dzakanakisa. Mhedzisiro yake muchinjikwa pakati peBig Bud uye White Chirikadzi murume. Kubva padivi rake rechiratidzo, anowana kureba kwake zvine mwero uye kutanga kwemaruva nguva. Baba vake vanopa kuravira kukuru, kunhuwirira uye kwakakwirira. MyWeedSeeds.com inodada nekupa iyi yakasarudzika mitsva mitsva. TropiCanna chirimwa chiri nyore-kukura, kungave kunze munzvimbo dzinodziya kana mumba. Mumba, anoita kunyanya mushe mugungwa rekurima girini (SOG). Iye anoisa anoshamisa mabukira anoputika kuita chando glaze of resin. Sezvaunogona kutarisira kubva kuzita rake, TropiCanna anokubata iwe kune inoshamisa, inodziya kuravira. Mabukira ake akave akatsanangurwa seanotumbuka, aine toni dzemoni nemavise. Kukwirira kwake kuri kusimudzira uye kukurudzira, ine buzz inotapira. Iye ndiye chinotevera chakanakisa chinhu kune tropical zororo